Ikhaya » izithuba » Iindaba zePaki yokuHamba ngeeNdaba » I-Disneyland, iAnaheim, iOrange County ilungele inqanaba elityheli kwiveki ezayo
Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba zePaki yokuHamba ngeeNdaba • Iindaba zoKhenketho • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba ze-USA
I-Disneyland, iAnaheim, iOrange County ilungele inqanaba elityheli kwiveki ezayo
Ukusukela namhla, ngolwe-Lwesibini, nge-11 kaMeyi, ngo-2021, i-Orange County kunye nezinye izithili eCalifornia zimiselwe ukuba ziye kwinqanaba le-yellow tier Ezi ziindaba ezimnandi zeAnaheim, isixeko esikwiOrange County esekhaya kwiDisneyland.
Iqondo le-Orange County lamatyala amatsha lehle laya kwi-1.8 ngosuku nge-100,000, ukuyibeka kummango wokufumana inqanaba elityheli.
Ezinye izithili esele zingene kumgangatho otyheli yiSan Francisco, iSan Mateo, iSierra, iMendocino, iAlpine, iLassen, iTrinity kunye neMono.
Ukufikelela kwinqanaba letier etyheli kuvumela amandla andisiweyo kwiivenkile zokutyela, iijimi, iithiyetha zemidlalo bhanyabhanya, iipaki zokuzonwabisa, iindawo zemidlalo, kunye neemyuziyam.
I-Orange County, iSanta Clara, iSanta Cruz, iTuolumne, kunye neAmador okwangoku bakwinqanaba leorenji, kwaye bonke bakulungele ukufudukela kumgangatho otyheli kwiveki ezayo ukuba iinombolo zabo zecoronavirus zihlala zihleli okanye ziyaqhubeka ukwehla. Okwangoku, iqondo le-Orange County lamatyala amatsha lehle laya kwi-1.8 ngosuku nge-100,000.
ILos Angeles yayiyindawo yokuqala Southern California ukufikelela kwinqanaba elityheli kwiveki ephelileyo. Oku yayikukuvulwa ngokubanzi ebanzi okoko i-COVID-19 yabetha ngaphezulu konyaka ophelileyo. Ezinye izithili esele zingene kumgangatho otyheli yiSan Francisco, iSan Mateo, iSierra, iMendocino, iAlpine, iLassen, iTrinity kunye neMono.
Onke la manqanaba Utshintsho luzisa i-9 kwizithili zeCalifornia ezingama-58 kwinqanaba elityheli. Akukho zibalo zibuyile umva, zibiza iintsuku zelanga zelanga kwiGolden State. Ezo counties zili-9 zenza malunga neepesenti ezingama-30 zabemi baseCalifornia okanye malunga nezigidi ezili-12 zabantu.